Esi ewepu Internet Explorer 7 | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 19, 2006 Tọzdee, Ọktoba 19, 2006 Douglas Karr
E nwere ọtụtụ ndị folks na-arịọ maka otu esi ewepụ IE7. Iwepụ ya na Tinye / Wepụ mmemme akara obubọk. Gbaa mbọ hụ na igbe “gosi mmelite”. Na-akpali ihe bụ na ntinye ke Control Panel bụ “Windows Internet Explorer 7” na ọ na-adịghị depụtara n'okpuru Microsoft ma ọ bụ nanị Internet Explorer:
Pịa Ka Mbugharị:
Gini mere ị ga-ewepu? Ọma… gụọ ikpeazụ m ntinye.
Salesforce.com anaghị arụ ọrụ na Internet Explorer 7 (Ọ na - eme n'ezie!)
Ọkt 20, 2006 na 2:49 PM
You're bụ dike m.